सुनमा लगानी : कुन दृष्टिकोणबाट सहि छ ? कुन दृष्टिकोणबाट गलत ? ~ Banking Khabar
सुनमा लगानी : कुन दृष्टिकोणबाट सहि छ ? कुन दृष्टिकोणबाट गलत ?
बैंकिङ खबर । कुनै बहसलाई तर्क पूर्ण ढंगले समाधान गरी निश्कर्षमा पुग्न कति समय चाहिन्छ । तपाई भन्नुहुनेछ केहि घण्टा । हुनसक्छ केहि दिन वा महिना सम्म केहि बहस हुनेछ । तर के यो सम्भव छ कि केहि शताब्दी पछि पनि सहमत हुन सकेन ? अचम्म नमान्नुहोस्, सुनमा लगानी गर्नु त्यस्तै एक मुद्धा हो । ठुलो छलफल पछि पनि यो प्रश्न अनुत्तरित नै छ कि सुनमा लगानीको दृष्टिकोणबाट सहि छ या छैन ।
यसको बारेमा अर्को तेस्रो दृष्टिकोण पनि छ, कानूनी रूपमा पनि सुनलाई एक लगानी मान्न सकिन्छ, तर केहि कारण यो राम्रो लगानी होईन । फेरी प्रश्न आउन सक्छ कुन मापदण्डका आधारमा लगानी राम्रो वा नराम्रो मानिन्छ त ? यसको सरल उत्तर हो यसबाट आउने रिटर्न, तरलता, स्थिरता र केही अन्य कुराहरु । यदि मूल्याङ्कन गरियो भने, सुनले यी चिजहरूलाई भेट्न सक्दैन ।